Nzvimbo dzekutengesa dzakanakisa muParis - ALinks
Kana iwe uchishanyira France, unofanirwa kushanyira mall akanakisa. Chinhu chakanakisa ndechekuti hapana chausingakwanise kuwana ipapo. Gadzirira kunakidzwa nekutenga kwakanakisa muFrance kune mamwe emaguta ane hunyanzvi. Dzimwe dzenzvimbo dzakanakisa dzekutenga panzvimbo yega yega uye cranny.
Mazita akawanda anozivikanwa, akadai saArmani, uye Cacharel, ane zvinhu zvaunogona kuvimba nazvo. Masiketi eHugo Boss ari 140€ pachinzvimbo che700€, masiketi eReebok akachipa hafu, uye Guess wachi dziri pasi pe200€. Unonzwa nzara uchitenga. Zorora nekudya kwakanaka kweItaly kuLa Fraschetteria uye kapu yekofi paMambo weKofi Starbucks. Chikafu chakagadzirwa kumba paMonument Café, kana kunyange mabhega ekumba paMaison Froude.
Les Galeries LaFayette ichitoro chine mukurumbira pasi rose chepamusoro-soro. Uye nzvimbo yekutenga ine mazana emhando. Vashanyi vazhinji vanoshanyira chitoro chikuru muParis. Iyo inozvirumbidza yakashongedzwa yemukati meiyo art nouveau maitiro. Vashanyi vazhinji vanouya pano kuti vaone panoramic yeguta. Kuratidzwa kwemafashoni kwakakurumbira kunowanzoitika.
Beaugrenelle Street inzvimbo ine mukurumbira yekutenga iri pakati peParis. Chinhambwe chipfupi kubva kana ukaona Eiffel Tower uye uchida kunotenga. Mazhinji iconic eParisian fashoni mavara uye anoyevedza masitaera ari pano. Kune vanogamuchira vane hushamwari varipo kuti vakubatsire kana waida. Ndiyo nzvimbo yakanaka yekuenda kunonaka kwemasikati mune yakashongedzwa.
Iyo yepasi pevhu Carrousel du Louvre iri padyo neLouvre uye Nzvimbo du Carrousel. Yakatanga kuvhura mikova yayo muna 1993 uye kubvira ipapo yakavaka mukurumbira wakasimba senzvimbo yekunakidzwa yekutenga. Sephora, Espirit, uye yekutanga Apple Store muFrance mazita anozivikanwa. Iri zvakare padyo nePalais Royal-Musée du Louvre metro station, inobatana nemitsara 1 uye 7. Kunyangwe iwe usingaronge kutenga, zvakakosha kuti umbomira uchiyemura La Pyramide Inversée, iyo ine mukurumbira skylight.
Yekutanga iMagnetic Island, inogara vatengesi vefashoni yepamusoro. Vakafanana neAigle, Michael Kors, Zadig naVoltaire, uye Hollister, pamwe chete nemhando huru dzakadai seH & M, Celio, uye Zara. Chiroto chefashionista neAgatha naGuerlain cosmetics uye mabhizinesi emhando yepamusoro. Zvichakadaro, iyo Panoramic islet inogara gumi nemana maresitorendi uye ina-nhurikidzwa Mark naSpencer. Iyo ine yemhando yepamusoro yezvakatipoteredza inoita kuti ive ine hushamwari yekutengesa mall.
Iko kune makuru fashoni, umbozha, uye runako mhando dzinomiririrwa. Zvigadzirwa zvakaita seDolce & Gabbana naKaren Millen mu "Printemps de la Mode." Izvo zvinoiswa muzvivakwa zvitatu zvechitoro, izvo zvine huwandu hwenyaya makumi maviri nenomwe. Vogue naLaura Mercier mu“Printemps Beauté,” uye Armani naLevi mu“Printemps Homme.” Inorongawo zviitiko uye makosi. Aya anogona kunge ari maworkshop ekugadzira bvudzi kana kuravira kwemwaka wekudya kana zvinwiwa.
Iyi mall ine zvishandiso uye zvitoro zvefashoni. Iine zvitoro zvekunaka, zvitoro zvehutano, uye zvitoro zvemultimedia. Zvitoro zvekutandarira, zvitoro zvekushongedza, uye hypermarkets zviripo munzvimbo ino yekutengesa.
Pamberi pechikafu, une dzakasiyana siyana sarudzo: chikafu chekukurumidza kuMcDonald's uye Starbucks. Kana imwe yakasiyana menyu kuRestaurant yeNyika neBeaudevin, Meltem, Salam, So, Tazio, uye Tazi.
7. Italy Mbiri
Mazita akasiyana-siyana akadai saAgatha, Guérin Joaillerie, uye Ouroboros anowanikwa muzvishongo. Nekuti ivo vane huwandu hwakakura hwehembe nemitengo. Adidas, André, Eram, uye kunyange Minelli ndevamwe vemhando dzeshangu dziripo. Un, Deux, Trois, Armand Thierry, Camaeu, kana Promod inzvimbo dzakanaka dzekuenda kuzvitoro zvefashoni. Mabhureki anozivikanwa saMarionnaud, Sephora, uye Yves Rocher ari muzvitoro zvekunaka. Iwe une sarudzo yekudya mumaresitorendi seHippopotamus neLa Croissanterie. Iyo Paul cheni, kana kunyange iri nyore Subway kana McDonald's, yakasarudzika uye inonzwisisika.
Dunhu iri ndiro bhizinesi rekutanga reEuropean rine mahofisi makuru emakambani uye mahotera eumbozha. Iri munharaunda yeLa Défense, 6 km kubva kuArc de Triomphe. Saiti iyi izere nekukwezva, neGrande Arche, zvimiro zvakakura, uye maonero ari kure eParis. Mamita 400 chete anoparadzanisa nzvimbo mbiri dzekutengesa. Ose akatarisana neGrande Arche uye akaparadzaniswa neParvis de la Défense.
Iine angangoita mazana maviri nemakumi mana ezvipfeko, zvekushongedza, uye mabhizinesi ekuzora. Les 240 Temps ndiyo nzvimbo huru yekutenga muEurope, kuve nechokwadi chekuti inowana zvavari kutsvaga. Mango, H&M, C&A, Bonobo, uye Esprit ndezvimwe zvezvitoro zvinozivikanwa zvembatya zvinozvidaidza kuti kumba.
9. Saka Ouest
Iyi nzvimbo yekutengesa iri muLevallois-Perret, France, pedyo neClichy-la-Garenne nePorte d'Asnières. Yakanga iri munzvimbo yemudhorobha uye chikamu chebumbiro rekusimudzira. Iyo iri mukugadzira uye Louis XV maitiro. Center TV masikirini uye anonhuwirira diffusers kugadzira akasiyana mamiriro zvichienderana.
Panguva yekutenga kwavo kwemazuva ese, vashanyi vari munzira uye vagari vemumaguta ari pedyo. Nzvimbo dzekutandarira nemasitepisi emushonga uyu akanakira kunhuhwirira kwemba yavo uye mimhanzi inodzikamisa. Zvakafanana neizvo munhu aigona kunzwa mune zvakasikwa. Zvese zvavanoda iEuropacorp bhaisikopo uye yakakura siyana yekudyira. Imba yemitambo, zvipfeko, kushongedza, runako, mitambo, zvigadzirwa zvematehwe, uye kunyange zvitoro zvezvishongo.
Mufananidzo webutiro uri kumwe kuParis, France. Mufananidzo na Serge Kutuzov on Unsplash
Vepamusoro Mahara emahara eIndia eMexico City
Zvinhu zvekuita muJoshua Tree National Park
Nzvimbo dzepamusoro dzeVashanyi dzekushanyira muIndia! Ziva Pano!
Museum !! Nzira yekuziva Nhoroondo Yako, Heano Makanaka Minyuziyamu YeAustralia